प्राइभेट एरियालाई कालो हुनबाट कसरी रोक्ने? यस्ता छन्, प्रभावकारी उपाय – Etajakhabar
प्राइभेट एरियालाई कालो हुनबाट कसरी रोक्ने? यस्ता छन्, प्रभावकारी उपाय
ताजा खबर :- यदि तपाईको गुप्तांग कुनै कारणले कालो भएको छ भने यसको मतलब सधैँ तपाईको भजाइना सँग हुँदैन । गुप्तांग तपाईको क्लीवेज, कम्मर, काँधमुनिको भाग, गर्दन पनि हुनसक्छ । कालो गुप्तांगको तात्पर्य त्वचाको ती भागहरूसँग हुन्छ, जुन देखिदैन र जहाँ मुलायम हुन्छ ।
शरीरको दोस्रो भागको लागि कुनै पनि स्किनकेयर मास्क वा ब्राइटनरको प्रयोग गर्न सकिन्छ । शरीरको गुप्तांगको लागि जहाँको त्वचा मुलायम हुन्छ, जसका लागि तपाईले निकै सोचविचार गरेर समाधान पत्ता लगाउनुपर्दछ । आज हामी तपाईलाई प्राकृतिक उपायहरूको बारेमा बताउँदै छौँ, जसको मद्दतले तपाई आफ्नो गुप्तांगलाई कालो हुनबाट रोक्न सक्नुहुन्छ ।
यसको लागि दुई कागती र यसको जूस आवश्यक पर्दछ । कपासको मद्दतले यसलाई आफ्नो गुप्तांगमा लगाउनुहोस् । बिकिनी लाइनमा लगाउँदा पहिले यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि त्यहाँ सफा छ वा छैन, नत्र पोल्ने समस्या हुनसक्छ । तपाईले कागतीको रसलाई १० देखि १५ मिनेट लगाउन सक्नुहुन्छ र चिसो पानीले धुन सक्नुहुन्छ ।
दहीको प्रयोगले पनि गुप्तांगको क्षेत्रलाई गोरो बनाउन सकिन्छ । दहीलाई मास्कको रूपमा लगाउनुपर्दछ । दहीलाई राम्रो सँग छान्नुहोस् । अब यस दहीलाई आफ्नो गुप्तांग रहेको ठाउँमा राम्रो सँग लगाउनुहोस् । १५ देखि २० मिनेट सम्म सुक्न दिनुहोस् र यसपछि यसलाई मनतातो पानीले धुनुहोस् ।
चन्दनको पेस्ट गुप्तांगको क्षेत्रलाई गोरो बनाउनको लागि सबैभन्दा प्राकृतिक औषधीको रूपमा हुन्छ । चन्दनको पाउडरमा गुलाबजल मिलाउनुहोस् र पातलो घोल बनाउनुहोस् । अब यस मिश्रणलाई कालो क्षेत्रमा लगाउनुहोस् । जब यो सुख्छ तब यसलाई मनतातो पानीले धुनुहोस् । यस तरिकामा थोरै लामो समय लाग्न सक्छ ।
अण्डा अलि दुर्गन्धयुक्त हुनसक्छ, तर गुप्तांगलाई गोरो बनाउनका लागि यो एक उपयोगी उपाय हो । तपाईले केवल अण्डाको पहेँलो भाग प्रयोग गर्नुपर्दछ । अण्डाको पहेँलो भागलाई राम्रो सँग घोलेर यसलाई गुप्तांगमा लगाउनुहोस् । केही समय पश्चात् यसलाई चिसो पानीले धुनुहोस् ।
बदाम र दूध
यस तरिकामा थोरै बढी समय लाग्न सक्छ तर यो निकै प्रभावकारी हुनसक्छ । दुई ठूलो चम्मच काँचो चिसो दूधमा दुई सानो चम्मच बदाम पाउडर मिलाएर पेस्ट बनाउनुहोस् । अब यस पेस्टलाई आफ्नो गुप्तांगमा लगाउनुहोस् । यसलाई १५ मिनेट पछि धुनुहोस् ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक २३, २०७४ समय: २:४३:२७